I-Stonehouse Nagambie - I-Airbnb
Bailieston, Victoria, i-Australia
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Jacob
Ibekwe phakathi kwamahektha ayi-14 phezulu kwegquma elibheke iGoulburn Valley - I-Stonehouse iyikhaya lamasosha elibuyiselwe ngothando eligcwele umlingiswa kanye nokukhangayo.
I-off-grid ngokuphelele enamandla ebhethri yelanga, ukupheka kwegesi kanye namathangi amanzi uzozizwa ukhululeke ngokuphelele lapho nje ungena emnyango ogqoke itshe.
Samukela ukusimama kanye ne-eco-living okuyiyona nto esiyithandayo ngale ndawo. Itshe elisendaweni engaphambili yendlu lidliwa khona kanye kule ndawo futhi lifaka phakathi uvulandi ukuze ujabulele ukuphuma nokushona kwelanga.
Inamakamelo okulala ama-2, igumbi lokugezela, igumbi lokuphumula elineziko lezinkuni nendawo yokudlela ehlukile kunesikhala esanele sewayini kanye nokudla nakho konke okuhlinzekwa yisifunda sendawo. Ingasaphathwa ikhishi elinosayizi ogcwele (elinohhavini womlilo wokhuni) kanye ne-sunroom.
Uhambo lwemizuzu engama-90 ukusuka eMelbourne, imizuzu eyi-10 ukushayela ukusuka enhliziyweni yeNagambie & imizuzu eyi-15 ukusuka eTahbilk Winery kunemisebenzi eminingi okufanele yenziwe endaweni, ikakhulukazi eduze kweLake Nagambie.
Njengoba uyindawo yasemaphandleni uzokwazi ukujabulela izilwane zasendle eziningi ezivame ukuhlala endaweni, kuhlanganise nezinyoni, ama-kangaroo, ama-wallabies.
Sicela isivakashi siqaphele izinyoka nezicabucabu njengoba ihlathi elizungezile liyimvelo engasetshenziswa.
4.64 · 55 okushiwo abanye
I'm a thirty something Australian who loves cooking, wine, travel, adventure, and now a new love for unwinding in the country! I have lived in Melbourne for over a decade and own a cafe in North Melbourne with another on its way.
Ukufinyelela akuthinteki nge-keysafe.
Kunendawo yokuhlala yesibili kule ndawo engase ihlalwe ngesikhathi uhlala (kungaba yithi noma abanye abenzi bamaholide). Ziyimfihlo ngokuphelele futhi zitholakala ngaphezu kwamamitha ayi-100 ukusuka kwenye, futhi izindawo ezingaphandle zibheke izindlela ezahlukahlukene ngakho ubumfihlo buqinisekisiwe. Indlela yokungena, kanye nempahla yangaphandle (isb. idamu, ihlathi njll) kuyabiwa.
Kunendawo yokuhlala yesibili kule ndawo engase ihlalwe ngesikhathi uhlala (kungaba yithi noma abanye abenzi bamaholide). Ziyimfihlo ngoku…
Hlola ezinye izinketho ezise- Bailieston namaphethelo